Soo dejisan Effector saver 4.6 iyo 3.3.7 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaEffector saver
Effector baado – software ah si ay gurmad xogta shirkadaha ama shakhsi. Ujeedada ugu weyn ee software-ka waa in la abuuro nuqul raad raac ah oo version mid ka mid ah database ee 1C ah: software Enterprise. baado Effector ku jira set oo ah qalab reserved hawlgalka software iyo imtixaanka iyo hagaajin database ah. software The u saamaxaaya in ay gurmad faylasha gaar ah, fayl, Microsoft SQL ama saldhigyada PostgreSQL oo ku kaydi on shabakadda, cajaladaha maxalliga ah iyo kuwa dibadda ama server FTP. baado Effector waa inay awoodaan inay si toos ah u qabtaan gurmad xogta iyadoo la raacayo jadwalka ku cad isticmaalaya qorsheeye hawsha dhisay-in.
Archiving by 1C ah: hab Enterprise
Archiving oo ka mid ah xogta random ama database-SQL
Baaritaanka iyo qamaar saldhigyadii
qaabab riixo gurmad kala duwan
Kaydinta of hayaan ku saabsan storages xog kala duwan
Sirta ah files gurmad
Soo dejisan Effector saver
Faallo ku saabsan Effector saver
Effector saver Xirfadaha la xiriira